မိုးစာငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
မိုးစာငှက် (Cypsiurus balasiensis) သည် ပျံလွှားငှက်၊ ဇီဝဇိုးငှက်တို့နှင့် အတူ အပိုဒီဒီးမျိုးရင်းတွင်ပါဝင်၍ ပါဏဗေဒအမည်မှာ "ဆစ်ပစိ အာရတ် ပါးဗတ်အင်ဖူမေးတပ်" ဖြစ်သည်။ အလျား ၅ လက်မရှိ၍ တစ်ကိုယ်လုံးတွင် ကျပ်ခိုးရောင် ထနေသည့် အညိုရောင်လွှမ်းနေသည်။ တင်ပါးတွင် ဖြူဖွေးခြင်းမရှိသဖြင့် အခြားပျံလွှားငှက်တို့မှ ခွဲခြားသိနိုင်သည်။ အမြီးမှာ သေးသွယ်သော နစ်ခွမှိန်းကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ပျံသန်းသဏ္ဌာန်တွင် ငှက်မသည် ငှက်ဖိုနှင့် ကွဲပြားခြင်းမရှိချေ။
မိုးစာငှက်သည် ကွင်းပြင်များတွင်သာ ကျက်စားသောငှက်ဖြစ်သဖြင့် ထန်းပင်ပေါများသော ရွာနီးချုပ်စပ်များ၌ အများအပြားတွေ့ရသည့်အပြင်၊ ဥယျာဉ်ပန်းခြံနှင့် မြို့ကြီးရွာကြီးတို့အလယ်ရှိ ဝင်းခြံများ၌လည်း မကြာခဏ လာရောက် ကျက်စားသည်။ ထန်းတောများ၌ ကျက်စားသည်ဟုဆိုရသော်လည်း ထန်းတောမရှိသည့် ဒေသတွင်လည်း ကျက်စားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အများဆုံး စားသောက်သောအစာမှာ မှက် ယင်ရဲများဖြစ်၍ ပျံသန်းရင်း ဖမ်းယူ စားတတ်သည်။ ပိုးဖလံနှင့် အခြားပိုးမွှားများကိုလည်း စားသေးသည်။ ကောင်ရေ ၁ဝဝဝ ခန့် ပါရှိသည့် မိုးစာငှက်အုပ်ကို ရေပြင်ပေါ်တွင် ပျံသန်းကျက်စားနေသည်ကို တွေ့ရတတ်ပေသည်။ မိုးစာငှက်၏ အော်သံမှာ အနည်းငယ် တုန်သံပါ၏။ သို့သော် အခြားသော ပျံလွှားငှက်မျိုး၏ အသံထက် သာယာလေသည်။
မိုးစာငှက်သည် မတ်လမှစ၍ မိုးရာသီတစ်လျှောက်လုံး သားပေါက်သည်။ အသိုက်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ် ၂ လက်မခန့်ရှိသည်။ ပန်းကန်ပြားငယ် ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်။ ထန်းလက်အောက်ဘက်တွင် အသိုက်ကို အမွှေးအမျှင်နှင့် သစ်ရွက် မြက်ပင်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ အသိုက်၏အရွယ် သေးငယ်ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ အသိုက်ပြုလုပ်ရာ သိပ်သည်းမှု ရှိခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း မြေပေါ်မှကြည့်လျှင် အသိုက်ကိုမြင်ရခဲသည်။ အစုအအုပ်နှင့် နေတတ်သော်လည်း သစ်ပင်တစ်ပင်တွင် အသိုက် ၂ ခု ၃ ခုထက် ပို၍ တွေ့ရခဲသည်။
တစ်မြုံလျှင် ဥ ၂ လုံးမှ ၃ လုံးအထိရှိသည်။ ဥများမှာ ရှည်မျောမျောဖြစ်၍ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသည်။ လွင်ပြင်များနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့၌ ထန်းလက်များတွင် အစုအအုပ်ဖြင့် သားပေါက်ကြသည်။ ထန်းပင်ပါးရှားသည့် ကချင်တောင်တန်းနှင့် ချင်းတောင်တန်းများတွင် ရွာရှိအိမ်များ၏ သက်ငယ်အမိုးစွန်း၌ လည်းကောင်း၊ အမိုးတွင်ရှိသည့် လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း၌လည်းကောင်း မိုးစာငှက် များ ပျံဝဲနေသည်ကို တွေ့ရလျှင် ရွာနှင့် နီးကပ်လာပြီဟု သိနိုင်ပေသည်။
မိုးစာငှက်ကို အာဖရိကတိုက်နှင့် အာရှတိုက် တောင်ပိုင်းတွင် အနှံ့အပြားတွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကွင်းပြင်များတွင် အမြဲတမ်းနေ၍ ပေ ၅,ဝဝဝ အမြင့်ရှိ ရွာများ၌လည်း တွေ့ရသည်။
↑ BirdLife International (2012). "Cypsiurus balasiensis". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုးစာငှက်&oldid=709604" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။